युवाका लागि अवसर | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश-सुदूरपश्चिम युवाका लागि अवसर
युवाका लागि अवसर
उद्यमी युवाका लागि ७ नं प्रदेशमा अवसरको ठूलो सम्भावना छ । रोजगारी सृजना गर्ने थुप्रै क्षेत्र प्रदेशभित्र छन् । हिजोसम्म कुनै अवसर नदेखेर बाहिरिन बाध्य युवा अहिले प्रदेशभित्र अवसर खोज्न लालायित छन् । लामो समय विदेश बसेर फर्केकाहरूमध्ये धेरैले अहिले प्रदेशभित्रै स्वरोजगार उद्यम शुरू गरेका छन् । विदेशमा आर्जित शीप र ज्ञान आफ्नै भूमिमा भन्नेहरूका लागि विभिन्न अवसर जुटेका छन् ।
विदेशमा हासिल गरेको शीप र कमाएको आम्दानीबाट यस क्षेत्रमा धेरै उद्यमी बनेका छन् । यसरी उद्यम गरेका युवाले आपैm मुनाफा मात्रै आर्जन गरेका छैनन्, बेरोजगार अन्य युवाका लागि रोजगारी सृजना पनि गरिदिएका छन् । यसले हिजोको हाम्रो समाज र अहिलेको समाजमा थोरै भए पनि रूपान्तरण ल्याएको छ । अवसर हाम्रै वरिपरि छन्, तर तिनको पहिचान र खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।
कुनै समय प्रदेशभित्र सामान्यतया घर निर्माण गर्नुप¥यो भने भारतबाट कामदार झिकाउनुपथ्र्यो । परम्परागत खेती–किसानीबाहेक कुनै शीप हासिल भएको थिएन । प्रदेशभित्र राज्यले सञ्चालन गर्ने ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि छिमेकी मुलुककै भर पर्नुपथ्र्यो । हाल यो अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । वैदेशिक शीप स्थानीय युवामा हस्तान्तरण हुँदै गएको देख्न पाइन्छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि युवाका लागि अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रम र त्यसको प्रभावकारिता स्थानीयस्तरमै देख्न पाइने अपेक्षा युवावर्गमा छ । कतिपय अवस्थामा युवा पलायन बढ्नुमा अवसरभन्दा पनि सामाजिक मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । कामलाई सानो/ठूलो भनेर छुट्ट्याउने प्रवृत्तिले स्वदेशमा अवसर हुँदाहुँदै पनि युवा पलायन बढ्दै गएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको युवाले खेतीकिसानी गर्नै हुन्न भन्ने खालको हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान छ । यस प्रकारको सोच परिवर्तन हुन सकेको छैन । कामकै आधारमा हेपिनुपर्ने अवस्था पनि नदेखिएको होइन ।
काम कुनै पनि सानो–ठूलो भन्ने हुँदैन । हाम्रो जागीरे मानसिकताले उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । पर्याप्त खेतबारी हुँदाहुँदै पनि खेत बाँझो राखेर विदेश पलायनको होडबाजी चलेको छ । यो अवस्था रोक्न राज्य किन असफल भयो ? रानीतिक दलहरू युवालाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउन सक्छन्, तर उद्यमी बनाउन किन सक्दैनन् ? व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन । युवामा देखिएको हीनताबोध अन्त्य गर्नतर्फ अब ढिलाइ गरिनु हुन्न । पछिल्लो समय पहाडी सात जिल्लाभन्दा तराईका कैलाली कञ्चनपुरमा विभिन्न प्रकृतिका उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तर, त्यहाँ काम गर्न युवा आकर्षित देखिँदैनन् । विदेशमा आर्जन हुनेजत्तिकै सुविधा दिँदा पनि उनीहरूले यहाँको काममा रुचि राख्दैनन् । लाज र सामाजिक मनोविज्ञानका कारण कतिपयले थाहा नपाउनेगरी काम गरिरहेका छन् । विदेशमा जे–जस्तो काम पनि गर्न तयार युवा त्यहाँको भन्दा राम्रो सुविधा दिँदा पनि अनिच्छुक हुनुको कारण पत्ता लगाएर सरकाले युवा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । विभिन्न एनजीओ/आईएनजीओहरूले समयसमयमा दिएका तालीम र उद्यमशीलतासम्बन्धी परामर्शले प्रदेशभित्रका थुप्रै युवाले शीप आर्जन गरेका छन । शीपयुक्त युवालाई मात्रै रोक्न सक्ने हो भने राज्य व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य देखिन्छ । अहिले रानाथारू समुदायका पुरुष मात्रै नभएर धेरै महिला घर निर्माणदेखि व्यावसायिक रूपमा तरकारी तथा च्याउखेती उत्पादमा लागेका छन् । दक्ष जनशक्तिका लागि हिजोको जस्तो पूरै अरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति छैन । तर, दक्ष जनशक्तिलाई समेत यहाँ रोक्न सकिएको छैन । हाम्रो जनशक्तिले सस्तोमा विदेशमा श्रम बेच्ने अनि सोही देशबाट महँगोमा जनशक्ति झिकाएर काम गराउँदा देशको विकास र समृद्धिले कतिसम्मको उचाइ लेला ? उर्वर भूमि बाँझो राखेर हामी खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हेर्दा राम्रो आशा गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन । जनताको आर्थिक अवस्थाको सामान्य अध्ययन नै नगरी करमा व्यापक वृद्धि गर्नु सङ्घीयताको ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भनेजस्तो भएको छ । निनियोजित बजेट वितरणमुखी र अनुत्पादक देखिन्छ । करको दर होइन, दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । अहिलेकै अवस्थामा सङ्घीय सरकारले युवाको हित र व्यावसायिक वातावरण सृजनामा काम गर्ला भनेर यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
(लेखक देव ट्रेनिङ एण्ड म्यानेजमेण्ट सर्भिस सेण्टर धनगढीका प्रबन्ध निर्देशक हुन्)